Biraon’ny SMM : Manitsakitsaka ny hasin’ny Dokotera -
AccueilRaharaham-pirenenaBiraon’ny SMM : Manitsakitsaka ny hasin’ny Dokotera
27/04/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Ankoatra ny fanelezana tsaho sy fanakorontanana saim-bahoaka nataon’ny biraon’ny SMM dia miharihary ihany koa izao fa tena manitsakitsaka ny hasin’ny Dokotera mihitsy izy ireo. Inona moa no antony ilazana fa nanely tsaho sy nanakorontana saim-bahoaka ny biraon’ny SMM, dia noho ny fanambarana an-kolaka sy mivantana nataon’izy ireo fa nampandosirina ilay mpandraharaha namoahan’ny “chaine pénale” didy famonjana vonjy maika taorian’ny fandalovan’ny teny amin’ny Bianco. Io iaraha-mahita io fa nalefa nitsabo tena tatsy amin’ny Nosy Maorisy ny tenany ary niverina an-tanindrazana rehefa vita ny fitsaboana tsy maintsy natao taminy. Efa nambara teto ihany moa fa tokony hametra-pialana ny biraon’ny SMM raha manana ny antsoina hoe “honnêteté intellectuelle” manoloana ireny fiampangana tsy marim-pototra nampisavorovoro ny saim-bahoaka ireny.
Fa ny tena loza ao anatin’izao adihevitra rehetra izao dia ny fahasahian’ny biraon’ny SMM manitsakitsaka tsotra izao ny hasin’ny Dokotera amin’ity raharaha Claudine ity. Mpiray tsikombakomba amin’ity mpandraharaha ity koa ve izany ny hopitaly HJRA ? Izany mantsy no dikan’ny fanambarana nataon’ny biraon’ny SMM tao amin’ny gazety mpiseho isan’andro iray nanao hoe : « ilàna fanamarinana ny fampidirana hopitaly an’i Claudine… ». Efa ny asan’ny Mpitsabo mihitsy eto no voatohintohina ary izay no tena zava-doza amin’ny fihetsiky ny biraon’ny SMM. Azo antoka fa tsy miombon-kevitra amin’izany avokoa ny Mpitsara mahalala tsara ny andraikitr’izany sendika izany ary manaja ihany koa ny sehatra hafa. Sangisangy ihany moa ny nilazana teto hoe « tsy tokony hanatona toeram-pitsaboana sy hopitaly intsony ve izany ny marary fa avy hatrany dia mivantana eny Anosy any amin’ny biraon’ny SMM… ! ».
“13 mey” : Efa zatra milalao faty